အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: September 2008
သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
Posted by Andaman Hero at 1:10 PM0comments
from Dr.Lun Swe blog
Posted by Andaman Hero at 1:06 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 12:57 PM0comments
ကော့သောင်းစက်လှေ မီး လူတဦးသေ၊ ကျပ်သိန်း ၆ ထောင်ကျော် ဆုံးရှုံး
စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်။
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့တွင် ယမန်နေ့ည ဓာတ်ဆီ တင်ဆောင်သည့် ကုန်သည် စက်လှေကြီးတစီး မီးလောင်ပေါက်ကွဲသဖြင့် စက်လှေသမား တဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ကျပ်သိန်း (၆)ထောင်ခန့် ဆုံးရှုံး ခဲ့သည်ဟု ကော့သောင်းမြို့ခံများက ပြောသည်။
ကော့သောင်းမြို့ ရွှေဇင်ယော်ရပ်ကွက် မန်းမြန်မာ တံတားအနီးတွင် ယမန်နေ့ည ၈ နာရီ ခန့်က စက်ဆရာက ရေစုပ်စက်နိုးနေစဉ် မီးထလောင်ခြင်းဖြစ်ကာ ယင်းသည် ယခုလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် စက်လှေမီးလောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုအခြေအနေကို ကော့သောင်းမှ စက်လှေသမားတဦးက ယခုလို ပြောသည်။
"ကုန်ပစ္စည်းတင်တဲ့လှေ ထွက်ခါနီးနေပြီကိုး လှေက၊ ဆီပေပါတွေ ပါတယ်လေ၊ ပါတော့ မနည်းကြီး ဆုံးရှုံးတယ်။ မနည်းဘူး လှေတင် သိန်းတစ်ထောင်ကျော်ကျော်လောက် ရှိမယ်။ ပစ္စည်းတန်ဖိုးလည်း မနည်းဘူး။ အခုထက်ထိ မငြိမ်းသေးဘူး မီးက။ အခုထက်ထိ မီးက လောင်လို့ ကောင်းတုန်းပဲ။ အထဲ ကပစ္စည်းက များတဲ့အခါကျတော့ လောင်လို့ မပြီးနိုင်ဘူး။ စက်ဆရာတယောက်တော့ သေသွားတယ် ပြောတယ်။ စက်ဆရာကတော့ ၀င်ပြီးမှ လုပ်နေရင်း သေသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ "
ယင်းသည် မြိတ်မြို့မှ ဦးစိုးစိုး ပိုင်ဆိုင်သော စက်လှေဖြစ်ပြီး စက်လှေ၊ ဓာတ်ဆီနှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်းများ အပါ အ၀င် ကျပ်သိန်း ခြောက်ထောင်ဖိုးခန့် ဆုံးရှုံးမည်ဟု ကော့သောင်းမြို့ခံများက ခန့်မှန်းကြသည်။
"ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်တယ်။ လှေကတော့ တော်တော့်ကို လှေကြီး။ အဲဒီမှာ ဆီပေပါက၊ ဓာတ်ဆီက အလုံး ၁၅၀ တဲ့။ နောက်တခါ စက်လှေမှာ သုံးတဲ့ စက်ဆီ အဲဒီဆီက အလုံး ပေါင်း ၅၀၀ အဲဒါတွေကို လောင်တာဗျာ။ အခုထိကို လောင်တုန်း။ တန်ဖိုးကတော့ မနည်းဘူး။ ဟိုတခါတုန်းကထက်များတယ်။ ဟိုတခါတုန်းက ကုန်သည်အငယ်ပေါ့။ ဒါက ကုန်သည် အကြီးစား။ တော်တော်ဆုံးရှုံးမယ်။ ပိုင်ရှင် ကတော့ ဘိတ်ကတဲ့။ လှေကလည်း လှေမကြာ သေးဘူး။ စက်အသစ်။" ဟု အခြား မြို့ခံ တဦးက ပြော သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားသူ စက်ဆရာမှာ အမည်စုံစမ်းဆဲဖြစ်ပြီး၊ စက်လှေပိုင်ရှင် နှင့် လှေသားများမှာ ထိုင်းဘက်ကမ်းဖြစ်သည့် ရနောင်းသို့ ထွက်ပြေးသွားသည်ဟု ကော့သောင်း ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးပြော သည်။
ယခုလ ၉ ရက်နေ့တွင်လည်း ငါးဖမ်းစက်လှေတစ်စီး ဆီဖြည့်နေစဉ် ဆေးလိပ်မီးမှတဆင့် မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး စက်လှေနှင့်အတူ ကုန်ပစ္စည်းများ မီးလောင်ပျက်စီးမှု ကျပ်သိန်း တထောင်ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
တောင်ဒဂုံ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း အမှတ် 70 တွင် နေထိုင်သော ဒေါ်ပြုံးနှင့် သူဧ။်သူငယ်ချင်း များ ဖြစ်ကြသောဒေါ်အုန်းအုန်းသန်း၊ မနွေးနွေး တိုဟာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်း ခလေး တွေကိုဖျားယောင်းပြီးထိုင်းမှာစက်ချူပ်ရမယ်ဆိုပြီးလူကုန်ကူးရောင်းစားနေပါတယ် ကော့သောင်း မှတဆင့် ရနောင်း ထဲရှိ မသီတာ ဆီကို မိန်းခလေးများစွာကိုပို့နေပါတယ် နီးစပ်ရရှိ ရင်အကြောင်း ကြားပြီ:အသိပေးကြပါ..
LIBERTY HAS GIVEN THIS INFORMATION VIA CBOX
Posted by Andaman Hero at 4:05 PM0comments
ဆောင်းပါးရှင် - ပြည်တွင်းမှ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး
ကျွန်တော် ဗိုလ်လောင်းကျောင်းဆင်းပြီးတော့ ခြေမြန်တပ်ရင်း တခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အမိန့်ရလို့ သွားရောက်သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးက ကျွန်တော့်ကို တပ်ခွဲရုံးမှာ တွဲဘက်ထားပေးပြီး စစ်ပညာကို သင်ပေးအုံးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တပ်စစ်ကြောင်းဟာ ရှေ့ တန်းထွက်ရပြီး ကျွန်တော့် တပ်ခွဲဟာ ရှမ်းပြည်နယ် မိုင်းကိုင်မြို့ ဆင်တောင် ဧရိယာမှာ စစ်ဆင်ရေး လှုပ်ရှားရပါတယ်။ ကျွန်တော့် တပ်ခွဲမှူးဟာ စီနီယာဖြစ်ပြီး တပ်ခွဲ (၅) ကို ကိုင်ရပါတယ်။ သူဟာ အရက်ကို ရေသောက်သလို ရေဗူးမှာ ရေမထည့်ဘဲ အရက်ကို ထည့်ကာ သောက်သုံးနေပြီး စကားပြောဆိုရာမှာလည်း ကြမ်းတမ်းလှ ပါတယ်။
စစ်ကြောင်းဟာ မိုင်းကိုင်မြို့ က ရွာတစ်ရွာကို ညနေပိုင်းလောက်မှာ ၀င်ရောက်ရှင်းလင်းပြီး တပ်ခွဲမှူးက ဒီရွာမှာ အခြေပြုမယ်လို့ ပြောကာ တပ်တွေကို နေရာချထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရွာလူကြီးကို ခေါ်ပြီး ရန်သူ သတင်း မေးရာမှာ မနေ့ကနေ့လည်ပိုင်း အချိန် ရွာအစွန်ကို SSA တပ်ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီး ဆင်တောင်ဘက် ပြန်ထွက်သွားကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးက "ကျွန်တော်တို့ အခုတလောတောင်တက်တာ များလို့ ခြေသလုံး ကြွက်တက်ပြီး ကိုက်ခဲနေတယ်။ နင်းနှိပ်ခိုင်းချင်တယ်။ ဒီအိမ်က ကလေးမဘယ်သွားလဲ သူကြီးလို့" မေးလိုက်ပါတယ်။ ရွာလူကြီးက "ဗိုလ်လုံ၊ မနက်က ဒီကလေးမနဲ့ သူ့အဒေါ်မြို့ ကို ဈေးဝယ်သွားတယ်၊ ညမိုးချုပ်ရင် ပြန်ရောက်မယ်။ ဟိုတခေါက် ဗိုလ်လုံလာတုန်းက မိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ ကလေးမကို ပြောတာ မဟုတ်လား" လို့ မျက်နှာ မကောင်းစွာနဲ့ ပြောပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးကလည်း "ဟုတ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက တပ်ရင်းမှူး အရေးပေါ်ဆွဲခေါ်တာနဲ့ ဒီရွာက ချက်ချင်း ပြန်ထွက်သွားရတယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သူတို့ ပြန်လာရင် နှိပ်ခိုင်းလိုက်မယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
ရွာလူကြီး ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါ SSA ၀င်သွားတဲ့ သတင်းရထားလို့ စစ်သည်တွေ အိမ်ပေါ်မှာ မအိပ်ဘဲ လုံခြုံရေးအရ အိမ်အောက်မှာ အကုန်ဆင်းအိပ်ကြရလို့ ကျွန်တော်နဲ့ တပ်ခွဲမှူးနှစ်ဦးဘဲ အိမ်ပေါ်မှာ အိပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ တပ်ခွဲမှူး ထမင်းစားတဲ့အထိ စောင့်နေပေမဲ့ သူက အရက်သမား "ဇိုးကြီး" လုံးလုံးလျားလျား ဖြစ်နေလို့ တော်တော်နဲ့ ထမင်းမစားဘဲ အရက်ကိုသာ လိမ့်ပြီး သောက်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ဆာဆာနဲ့ အမြည်းကိုသာ စားနေရပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးဟာ အရက်ရေချိန်ကိုက်လာပြီး ခဏလှဲရင်း အိပ်ပျော်သွားစဉ်မှာ တံခါးခေါက်သံ ကြားလို့ ကျွန်တော်လည်း "ထ" ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရှင် ဖြစ်ဟန်တူပြီး မြို့ တက်ဈေးဝယ်သွားရာက ပြန်လာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက် (၆၀) ခန့် အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးနဲ့ အသက် (၁၅) နှစ်သာသာ အမျိုးသမီးငယ်လေး ကို တွေ့လိုက်ရ ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦးဟာ ဈေးဝယ်ရာကပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို နေရာချလိုက်စဉ် အသံဗလံ ကြားလိုက်ရလို့ တပ်ခွဲမှူး နှိုးလာပြီး သူတို့နဲ့ ရှမ်းလို ပြောနေကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် အသက်ကြီးကြီး ရှမ်းမကြီးက အတွင်းအိပ်ခန်းကို ခပ်ရို့ ရို့  ၀င်သွားပြီး ရှမ်းကလေးမလေးဟာ ခြေထောက်ရေဆေးကာ ကိုယ်လက်သန့်စင်နေချိန်မှာ တပ်ခွဲမှူးက နှိပ်ခိုင်းဖို့ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တပ်ခွဲမှူးက သူ့ရဲ့ ခြေထောက်၊ ပေါင်တွေကို နင်းခိုင်းရာ ရှမ်းကလေးမလေးဟာ စိတ်မပါတပါ၊ ကြောက်ကြောက် ရွံ့ ရွံ့ နဲ့ နှင်းနှိပ်ပေးနေပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ “မိုး” သဲကြီးမဲကြီး ရွာပြီးတပ်ခွဲမှူး တို့ စကားပြောသံနဲ့ လှုပ်ရှားသံတွေ မသဲမကွဲ ဖြစ်နေရာ “၀ုန်း” ကနဲ ပြုတ်ကျသံကို ကြားလိုက်ရ ပြန်တာကြောင့် ကျွန်တော် “ထ” ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ ဖယောင်းတိုင်မီး၊ မီးဇာကုန်ပြီး ငြိမ်းသွားတဲ့ အပြင် အနည်းငယ် ဝေးနေလို့ မြင်ကွင်း မသဲမကွဲဖြစ်နေပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးနဲ့ နင်းနေတဲ့ ရှမ်းမလေးလုံးထွေးရစ်ပတ်နေတဲ့ အသံဗလံ ကြားရလို့ ကျွန်တော်လည်း ပစ္စတို သေနတ်ဆွဲပြီး ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေချိန်မှာ အသံများ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းတုန်းက သင်ခန်းစာတွေ သင်ချိန်ကို အတွေးနဲ့ ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ စစ်မြေပြင် အတွေ့အကြုံ တွေကို နည်းပြဆရာတွေက ရှင်းလင်းရာမှာ ရွာထဲက တချို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ရန်သူအမာခံဖြစ်နေတတ်ပြီး မိန်းမဆိုတဲ့ အားနွဲ့မှုကို အကာအကွယ်ယူပြီးတော့ ရန်သူဖြစ်နေတတ်တာကို ပြောဆိုခဲ့တာ ပြန်လည်ကြားယောင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်ခွဲမှူးကို စိတ်ပူပြီး သူ့ထံကို သွားဖို့ အိပ်ယာမှ ထလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှမ်းမလေးဟာ ခြေဆောင့်ပြီးတော့ တပ်ခွဲမှူး အိပ်ယာက “ထ” သွားကြောင်း အသံကြားလိုက်ရလို့ စိတ်အေးသွားပြန်ပါတယ်။
နောက်နေ့ နံနက်စာ စားချိန်မှာ ကျွန်တော်က တပ်ခွဲမှူး ရဲ့  မျက်နှာကို မသိမသာ အကဲခတ်ရင်း ညက ဖြစ်စဉ်ကို မေးဖို့သင့်၊ မသင့် ချိန်ဆနေပါတယ်။ ထိုစဉ် တပ်ခွဲမှူး လည်ပင်းမှာ ကုတ်ခြစ်ရာ “အစင်း” တခုကို တွေ့လိုက်ရပြီး အံ့သြမိသွားပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးက မလုံမလဲ မျက်နှာနဲ့ “ငါ ညက နင်းခိုင်းတဲ့ ရှမ်းမလေး ဖယောင်းတိုင်မီး၊ ရုတ်တရက် ငြိမ်းသွားလို့ လန့်ပြီး င့ါ အပေါ် ပြုတ်ကျလာတယ်။ ပြီးတော့ ကောင်မလေးလက်က ငါ့ရဲ့  အင်္ကျီအိတ်ကပ်ထဲက စစ်တပ်လျှို့ ဝှက် ဆက်သွယ်ရေး သင်္ကေတ စာအုပ်ကလေးကို သိလို့ နှိုက်တာလား၊ မသိလို့ နှိုက်တာလား၊ ငါလဲ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေတုန်း ကမန်းကတန်း ပိုက်ဆံ ထိုးထည့်ပေးကြည့်တော့ သူ ကျေနပ်သွားလို့ တော်သေးတယ်။ ဒါတောင် ပိုက်ဆံက အရွက်ကြီး ဖြစ်နေလို့ အရွက်သေးနဲ့ မနည်းပြန်လဲ နေရသေးတယ်” လို့ စီကာပတ်ကုံး၊ မြိန်ရေရှက်ရေ ရှင်းပြနေပါတယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီတပ်ခွဲမှူးတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ၊ သူနင်းနှိပ်လိုက်တာလား၊ နင်းနှိပ်ခံတာလား.. .သူတို့ နှစ်ဦးဘဲ အသိဆုံးဖြစ်မှာဘဲလို့ တွေးလိုက်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ တပ်ခွဲမှူးရဲ့  တိုင်းရင်းသူတွေ အရိုးခံဖေါ်ရွေမှု၊ ပွင့်လင်းမှု အပေါ် အခွင့်အရေးယူပြီး လက်နက်ကိုင် ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျင့်တာကို မုန်းတီးနေမိပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့ ပြီး နင်းနှိပ်ပေးရတဲ့အတွက် “ပန်းကောင်း အညွှန့် ကျိုး” ရတဲ့ ငယ်ရွယ်လွန်းသူ တိုင်းရင်းသူလေးကိုလည်း ဂရုဏာ သနားခဲ့ရပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ပိုက်ဆံပေးရင်တောင်မှ များသွားမှာ စိုးလို့ အနည်းဆုံး အရွက်ကို ရွေးပြီး ပြန်လဲပေးခဲ့တဲ့ တပ်ခွဲမှူးရဲ့  စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ရွံ့ရှာ မိပါတယ်။ ဒီလို စပယ်ဖြူကလေးတွေ ဘယ်လောက်တောင်များ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးအောက်မှာ နစ်မွန်းခဲ့ပြီလဲလို့ တွေးရင်း သက်ပြင်း အခါခါ ချခဲ့မိပါတယ်ခင်ဗျား။
အပြည့်အစုံ သို့ .....
Posted by ဖိုးတရုတ် at 12:48 AM 1 ယောက်က ဒီလို ထင်တယ်။
ဆောင်းပါးရှင် - ဆရာကံ (တပ်မ ၂၂)
၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လက ဘားအံမြို့မှာ လူထုတွေဆန္ဒပြနေပြီး နာရီစင်အနီး ဘုရားကြီးဝင်းထဲမှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ထားပါတယ်။ အဲဒီသပိတ်စခန်းကို (၂)ရက်အကြာနံနက် ၀၃း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ တပ်ရင်းက တပ်ခွဲ (၂)ခွဲနဲ့ သွားဝိုင်းရပါတယ်။ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းက ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူထုကို အပြီးအပိုင် မောင်းထုတ်ခိုင်းပြီး၊ မထွက်ပါက ပစ်ခတ်ရန်အတွက် အဲဒီအချိန်က အမှတ် (၂၂) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ် တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်လှက အမိန့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းက လူထုအားလုံး ကြောက်လန့်ပြီး အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုနဲ့ ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘုရားကြီးဝင်းအတွင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ မီးစက်များအားလုံးကို တပ်မမှူးမှ သိမ်းဆည်းခိုင်းပါတယ်။ ဒါတွေကို (တပ်မ) ပိုင်ပစ္စည်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ပိုင်းမှာဘဲ တပ်မ(၂၂)ကို တပ်ရင်း (၅)ရင်းနဲ့ ထုတ်နှုတ်ပြီး ရန်ကုန်ကို ရှေ့တန်းထွက်ရမယ်လို့ အမိန့်ရတဲ့အတွက် တပ်ရင်း(၅)ရင်း ရန်ကုန်မြို့ကိုသွားရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်ဟာ အမှတ် (၂၂) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတစ်ရင်းမှာ စစ်သက် ၁ နှစ်ခွဲရှိတဲ့ လူသစ်ဘဝသာ ရှိပါသေးတယ်။
(၅) သာကေတမှာ တပ်ရင်းတစ်ရင်း နေရာချသတ်မှတ်ပေးထားပြီး အောင်ဆန်းကွင်း၊ သုဝဏ္ဏကွင်း၊ ကျိုက္ကဆံကွင်းများကိုတော့ စစ်ဒေသမှူး၊ ဗျူဟာမှူးများကို နေရာချထားပေးပါတယ်။ အဲဒီတပ်များဟာ မြို့နယ်အလိုက် တာဝန်ယူရပါတယ်။
မိမိတပ်ရင်းတာဝန်ကျတဲ့ မြို့နယ်အလိုက် ကားနဲ့ တနေကုန် လှည့်ပေးရပြီး တပ်ခွဲတစ်ခွဲမှာ စစ်ကားကြီး (၃)စီးတွဲ၊ ကားပေါ်မှာ မိုက်တလုံးစီချိတ်၊ ကားဘေးဘယ်ညာ သံဆူးကြိုးခွေ (၂)ခွေစီချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ ဒီသံဆူးကြိုးခွေဟာ လူထုအုံကြွတဲ့အခါ လူထုအလယ်မှာ ကားမောင်းသွားပြီး သံဆူးကြိုးခွေ ဖြေချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး တပ်ရင်းအလိုက် နေ့၊ ည လူထုနှိမ်နှင်းဖို့၊ ရိုက်နှက်ဖို့၊ ပစ်ခတ်ဖို့ သင်တန်းတက်ရပါတယ်။ အဲဒီ သင်တန်းတက်တဲ့အခါ အဓိကပစ်ခတ်ရေး၊ ရိုက်နှက်ရေးမှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစစ်သည်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး၊ ပစ်ခတ် ရိုက်နှက်လို့ သေကြေ ဒါဏ်ရာရသူများကို ဗမာလူမျိုး စစ်သည်တွေက လူနာကောက် ကားပေါ် ပစ်တင် ဆိုပြီးတာဝန်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီစတင်ပစ်မိန့်ပေးတဲ့နေ့မှာ မြို့တော်ခန်းမနဲ့ ဆူးလေဘုရား တဝိုက်မှာ လူထုတွေ ရာနဲ့ချီသေပြီး ဒဏ်ရာရသူများကိုလည်း မသေမရှင်ကားပေါ်ပစ်တင်ကာ တာမွေသင်္ချိုင်း က ပေ ၅၀ ပတ်လည် ဘူဒိုဇာ နဲ့တူးထားတဲ့ကျင်းထဲကို သွန်ချပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မသေတဲ့လူလည်းအများကြီး ကျင်းထဲသွန်ချပြီး ဘူဒိုဇာကားကြီးနဲ့ မြေဖို့ပါတယ်။ အဲဒီကျင်းထဲမှာ လူထောင်နဲ့ချီ ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီနားမှာ တပ်ခွဲတစ်ခွဲ ပတ်လည် စောင့်နေရပါတယ်။
အသံလွှင့်ရုံနားမှာလည်း ပစ်ခတ်လို့ သေကြေဒဏ်ရာရကြတာ အများကြီးပါဘဲ။ အင်းစိန် ဘီပီအိုင်၊ အာအိုင်တီမှာလဲ အဲဒီလိုဘဲပစ်ရပါတယ်။ တောင်ဥက္ကလာပ၊ သာကေတ ကုန်းကျော်တံတား၊ သာကေတ ကျောက်တိုင်အနီး၊ သံလျင်တံတား၊ မြောက်ဥက္ကလာ န၀ဒေးလမ်းဆုံ၊ မြောက်ဥက္ကလာ ကုန်းကျော်တံတား၊ သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဈေး အနားတဝိုက်။ အဲဒီနေရာတွေအားလုံး လူထုတွေသေကြေ၊ ဒဏ်ရာရသူ အများဆုံး ပစ်ခတ်မှုအများဆုံး နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားသွန်တဲ့နေရာကတော့ အဲဒီတနေရာဘဲသိပါတယ်။
အဲဒီ ၈၈ လူထုဆန္ဒပြပြီး ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတဲ့အချိန်မှာ တပ်မှူးတွေက ဒဏ်ရာရတဲ့လူထုတွေ၊ သေတဲ့ လူထုတွေ ဆီမှာ ပါလာတဲ့ငွေတွေ၊ လက်စွပ်တွေ၊ ဆွဲကြိုးတွေ၊ နားကပ်တွေကို သူနဲ့ရင်းတဲ့ရဲဘော်တွေကို အတင်း ဖြုတ်ခိုင်းပါတယ်။ တချို့တပ်မှူးတွေဆို ရွှေတွေ ငွေတွေအများကြီး လူထုထံက လုယက်ဖြုတ်ယူတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ အရေးအခင်း ကာလမှာ နေ့ ည လမ်းပေါ်မှာ လူ(၅)ယောက်ထက်မစုရ၊ (၅)ယောက် ထက်စုပြီး စကားပြောမိရင် ချက်ချင်းဖမ်း၊ ကားပေါ်ခေါ်တင်၊ ရဲစခန်းပို့၊ အမှုဖွင့်၊ ငွေဒဏ်ရိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ၁၂ လပိုင်းလောက်မှာ ကျနော့်တို့တပ်မ ကကျန်တဲ့ (၅)ရင်းပေါင်းပြီး ပထမ (၅)ရင်းကို သွားချိန်းပေးရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ နည်းနည်းတော့ငြိမ်သွားပါပြီ။ အဲဒီအချိန်ရောက်တော့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူထုတွေ(၂၂) ဆိုတဲ့ဘက်တံဆိပ်ကိုတွေ့ရင် အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ကြောက်နေကြပါတယ်၊ နောက်ပြီး တော့ မုန်းလဲမုန်းကြပါတယ်။
ကျနော်တို့တပ်တွေကို ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်က ဘယ်နားမှာ အများဆုံးဖြစ်သလဲ၊ ဘယ်ရပ်ကွက်မှာ အများ ဆုံးဖြစ်သလဲ၊ ဘယ်နားမှာ လူဆိုးတွေများသလဲ၊ အရက်သမားများသလဲ။ အဲဒါကို စစ်ကားကြီးနဲ့ တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် လိုက်ပတ်ခိုင်းပါတယ်။ သွားတဲ့အချိန်မှာ ရဲဘော်ကိုယ်စီ ဒိုင်းတစ်ခုစီ၊ နံပါတ်ဒုတ်တစ်ချောင်းစီ ပေးထားပါတယ်။ စစ်ကားဖြတ်သွားတဲ့အချိန် လမ်းပေါ်မှာမူးနေတဲ့လူတွေ တွေ့ရင်၊ ကားနားဖြတ်လာတဲ့ လူတွေတွေ့ရင် ဆင်းရိုက်ခိုင်းပြီး မေးမြန်းမှုမရှိ ကားပေါ်ခေါ်တင် ကြိုးနဲ့တုပ် စစ်ဆေးမှုမရှိ ရဲစခန်းအချုပ်ထဲ သွားထည့်ပါတယ်။ တချို့ အရပ်သားတွေဆိုရင် ဘာမသိ ညာမသိ အဖမ်းဆီးခံရ၊ အရိုက်နှက်ခံရ၊ အချုပ်ခံရပါ တယ်။ တချို့ဆို ကြည့်လို့မရရင် ဘာအပြစ်မှမရှိဘဲ အရိုက်နှက်ခံ အထိုးကြိတ်ခံရတယ်။
လူကြီးဆိုတဲ့လူဟာ ရဲ၊ ရဝတတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ဘာမှမဖြစ်တဲ့လူထုတွေကို ဖမ်းဆီး အမှုဖွင့်၊ လူထုထံက ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်ဆိုပြီးညှိ ငွေတောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ မျှဝေယူတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့ အောက်ခြေ အားလုံးသိတယ်၊ ပြောပိုင်ခွင့်မရှိ၊ မပြောရဲပါဘူး။ နောက်ပြီး ညတိုင်း ညတိုင်း ကျနော်တို့အောက်ခြေ အိပ်ရေး ပျက်ရပါတယ်၊ ရပ်ကွက်အလိုက် တအိမ်ဝင် တအိမ်ထွက် ဧည့်စာရင်းစစ်ခိုင်းပါတယ်။
တပ်ခွဲမှူးလုပ်တဲ့လူဟာ ရဝတရုံးမှာ သောက်စား၊ ပျော်ပါးပြီး အောက်ကငယ်သားတွေကို ဒီည လူဘယ်နှစ်ယောက် ဖမ်းလာခဲ့ဆိုရင် ရအောင်ဖမ်းလာရတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေမပြည့်မချင်း မိုးလင်း အောင် ဧည့်စာရင်း စစ်ရတယ်။ ဧည့်စာရင်းစစ်တာက နာမည်ခံပါဘဲ၊ အပြစ်မရှိတဲ့လူထုတွေကို လိုက်ဖမ်း ဒဏ်ငွေတောင်းပြီး ပြန်လွှတ်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ရဝတ က သူကြည့်မရတဲ့လူတွေ၊ စားနိုင်သောက် နိုင်တဲ့လူတွေကို မှတ်ထားပြီး တပ်ခွဲမှူးလုပ်တဲ့သူကိုပြော၊ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အောက်ခြေကို သွားဖမ်းခိုင်း၊ အမှုဖွင့်၊ ဒဏ်ငွေ တောင်းပြီးပြန်လွှတ်၊ ဒီလိုဘဲလုပ်နေတာပါဘဲ။ တပ်ရင်းမှူးလုပ်တဲ့လူက ဒီတစ်လအတွင်းမှာ တပ်ခွဲမှူးတွေ ငွေဘယ် လောက်ရှာပေးရမယ်၊ ဘယ်လောက်အပ်ရမယ်ဆိုတာလည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကျနော့်တို့တပ်ရင်းတွေ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ဆန္ဒပြရင် ဖြိုခွင်းဖို့ဆိုပြီး ဖြိုခွင်းရေးသင်တန်း တက်ရပါ တယ်။ ပထမအကြိမ် တပ်ရင်းက တပ်ခွဲလိုက် ထုတ်နုတ်အင်အား ထုတ်နုတ်ပြီး အင်းစိန် အာအိုင်တီ ကျောင်းဝင်းမှာ (၇)ရက်တိတိတက်ရပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်းမှာ ပစ်ခတ်တဲ့ (၁၀)ယောက်အဖွဲ့ (၃)ဖွဲ့၊ တယောက်နဲ့တယောက် (၂)လံကွာ တန်းစီရပ်ပြီး ကားပေါ်မှာ စက်လတ်တလက်စီ တင်ထားပါတယ်။ ပစ်တဲ့နေရာမှာ ပထမတန်း ကျည်တဘောက်စီ မတ်တပ်ရပ်ပစ်ပြီးတာနဲ့ ဒုတိယတန်း ရှေ့ကိုပြေးတက်ပြီး နေရာ ယူ ဒူးထောက် ပစ်ခိုင်းပါတယ်။ တတိယတန်းမှောက်ပစ်အဖွဲ့လဲ အဲလိုပါဘဲ။ ပြီးတာနဲ့ ကားပေါ်ရှိ စက်လတ် အဖွဲ့ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် အဲဒီသင်တန်း အာအိုင်တီကျောင်းဝင်းမှာတက်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် သုဝဏ္ဏကွင်းမှာ အဲဒီလိုဘဲ ပြန်တက်ရပါတယ်။ နောက်ပြီး တပ်ရင်းတိုင်း တပ်ခွဲတိုင်းမှာ အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ဖို့ တိုင်ကွမ်ဒို၊ ကရာတေး၊ ကရာတေးဒို၊ ဂျူဒို ဆိုတဲ့အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရေးသင်တန်း တက်ခိုင်းပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရဲဘော်တွေ ဘယ်ဘဲသွားသွား သေနတ် အီကွစ်မင့် အပြည့်အစုံ၊ ဒိုင်းတစ်ခု၊ နံပါတ်တုတ်၊ ဖိုင်ဘာဦးထုပ်၊ လှံစွပ် နေ့စဉ်အသင့်ပြင်ခိုင်းထားပါတယ်။
အဲဒီအချိန် ရဲဘော်တစ်ဦးစီ တပ်ဆင်မှုမှာ ကျည်ဆံ ၂၅၀ တောင့်၊ ဘောက် ၅ ဘောက်၊ လှံစွပ်တစ်ချောင်း၊ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးစီနဲ့ နိုင်လွန်ကြိုးခွေတစ်ချောင်းစီတို့ ကိုယ်စီတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဧည့်စာရင်းစစ်တာ အကြောင်းပြ၊ အချိန်မတော် အိမ်ပေါ်တက်၊ အိပ်နေတဲ့ မိသားစုခြင်ထောင်ကို အတင်းဆွဲလှန်၊ တချို့မိသားစု တွေဆို ဖင်ပေါ်ခေါင်းပေါ်၊ တချို့တပ်မှူးတွေဆို သက်သက်မဲ့ ဧည့်စာရင်းအကြောင်းပြပြီး လူထုတွေကို ဒုက္ခပေး ခဲ့ကြပါတယ်။
တချို့ရဲဘော်တွေ တပ်မှူးတွေဆို အဲသလိုအိမ်တွေပေါ်မှာ လှပပြီးမျက်နှာသစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဘာတွေတွေ့ရင် အိမ်ရှင် မသိအောင် ခိုးယူသွားသေးတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့က တိုင်းရင်းသားရဲဘော်တွေဆိုတော့ ဘာကိုမှ ပြန်မပြောရဲဘဲ နည်းနည်းပြောသံထွက်ခဲ့ရင်လည်း ပါးရိုက်ခံရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဆို လူကြီးတွေ အဆင့်လိုက် စီးပွားဖြစ်ပြီး လူထုအပေါ်အမြတ်ထုတ်၊ အောက်ခြေအဆင့် ဘာမသိတဲ့ရဲဘော်တွေကို အမိန့်ပေး ခိုင်းနေတာကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လူထုအများစုက နားလည်ကြပါတယ်။ အောက်ခြေကို လူထုတွေက သနားကြပါတယ်။ ကျနော့်ဆို တချို့လူထုတွေနဲ့ မိဘရင်းလို ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအလုပ်မျိုး မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ အားလုံး ရှင်းပြလို့ လူထုများလည်း သဘောပေါက်ကြပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကဆိုရင် အထက်လူကြီးတွေ ခိုင်းတိုင်း၊ ပြောတိုင်း လုပ်နေရတာကို မလုပ်နိုင်ဘူး ငြင်းဆန်ခဲ့ ရင် ရိုက်နှက်ပြီး ထောင်ထဲချက်ချင်းထည့်ခံရပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တောထဲရှေ့တန်းအပို့ခံရပါတယ်။ သာကေတ ကျောက်တိုင်ကနေ ကုန်းကျော်တံတားဘက်အတက်မှာ ဘုန်းကြီး(၂)ပါးနဲ့ အဲဒီနောက်မှာ လူထု (၁၀)ယောက် လောက် အေးအေးဆေးဆေးလာနေတဲ့ဟာကို တပ်မ (၂၂ )ကဘဲ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။
အရေးအခင်းကာလမှာ လူထုကိုပစ်တာကို စစ်မြေပြင်မှာတိုက်တာထက် သူတို့ပျော်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့တပ်မှူးတွေ ရဲဘော်တွေဆို လူထုကိုကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကဆို လူထုအပေါ်အနိုင်ကျင့်ချင်တိုင်း ကျင့်နေပါတယ်။ ဒီအပြုအမူဟာ ရန်ကုန်မြို့် အရေးအခင်းကာလ တာဝန်ကျနေတဲ့ တပ်ရင်းတိုင်းလိုလိုပါဘဲ။ တချို့တပ်မှူးတပ်သားတွေဟာ လူထုအပေါ် အနိုင်ကျင့်၊ အမြတ်စားဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုံးဝလက်မခံတာလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ တချို့တပ်မှူးငယ်တွေဆို မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို တားမြစ်လို့ ပါးရိုက်ခံရပြီး အရေးယူခံရတာရှိသေးတယ်။
၈၈ ခုနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်ထိ အင်းစိန် အာအိုင်တီကျောင်း အုတ်နံရံမှာ ကျည်ဆံထိထားတဲ့အရာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ သွေးကွက်တွေ ခြောက်ကုန်ပြီး ရေနဲ့မဆေးထားပါ။ အရေးအခင်းကာလမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ တကယ်သေသူတွေရော မသေမရှင်လူတွေကိုပါ ကျင်းထဲကို ကားနဲ့သွန်ချတာ သောင်းဂဏန်းလောက် ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကိုယ်တွေ့အဖြစ်မှန်ကို ရေးသားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
Posted by ဖိုးတရုတ် at 12:54 AM0ယောက်က ဒီလို ထင်တယ်။
Posted by Andaman Hero at 3:42 PM0comments
မနီလာသိန်း (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူ ဒေါ်တင်တင်ဝင်းသည် အသက် ၇၅ နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ် လအတွင်းက သားဖြစ်သူ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်သည် ကိုဂျင်မီအပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ [Top]
မုန်တိုင်းသင့်ကလေးများ ရေသန့်ရရေး စိုးရိမ်ရ၊ WFP ကို ပြည်တွင်းမှာ ဆန်ဝယ်ခွင့်မပေး
UNOCHA/ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမှ မုန်တိုင်းဘေးသင့် ကလေးများအတွက် ရေရှည်တွင် ရေသန့်ရရေး စိုးရိမ်ရသကဲ့သို့ ပြည်တွင်းဆန် ၀ယ်ယူရေးကိုလည်း ဆက်လက်တင်းကျပ်ထားကြောင်း စက်တင်ဘာ (၁၂) ရက်ထုတ် ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးရုံး (UNOCHA) အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၄၈) ၌ ဖော်ပြသည်။
လပွတ္တာမြို့နယ် (၃) မိုင်နှင့် (၅) မိုင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရှိ မုန်တိုင်းသင့်ဒုက္ခသည်များကို ယခုလ (၄) ရက်နေ့ တွင် ကျေးရွာနှစ်ရွာသို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ စခန်းနှစ်ခု စုစုပေါင်းဦးရေမှ (၄၆၇) ယောက်ကို ပိန်းနဲ တောင်ရွာတွင်လည်းကောင်း၊ စခန်း (၃) မှ (၇၆၂) ဦးကို မင်းကုန်းရွာတွင်လည်းကောင်း ပြန်လည်နေရာချထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအဖြစ် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ပေးသည့် အဆိုပါ ရွာများသည် အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းမနှင့် (၂) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။
(၅) မိုင်စခန်းမှ ယခင်က စွန့်ခွာထွက်သွားပြီးနောက် စခန်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ အခြား အိမ်ထောင်စု (၇၄) စုကိုလည်း ကျောက်ဖြူရွာတွင် ပြန်လည်နေရာချထားပြီးဖြစ်သည်။
မုန်တိုင်းသင့်အချို့နေရာများတွင် ခြောက်သွေ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် လက်ရှိစိုက်ပျိုးသီးနှံများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ရသည်။ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မိုးလေ၀သ အချက် အလက်များအရ ယခုနှစ်မုတ်သုန်ရာသီ ကုန်ဆုံးမှုသည် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ စောကုန်မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ယာယီစာသင်ကျောင်းများကို ဆက်လက်ထိန်း သိမ်းထားရှိရေး အတွက်လည်း စိုးရိမ်ရမှုများရှိနေသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။ ယခုနှစ် မိုးရာသီကာလ တိုတောင်းနိုင်သဖြင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအတွင်းရှိ ကလေးများနှင့် စာသင်ကျောင်းများအတွက် သောက်ရေသန့် ရေရှည်ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း အထူးစိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ အခြားစိန်ခေါ်မှုတရပ်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအတွင်း လုပ်ကိုင်နေသော အန်ဂျီအိုများအနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကို တင်သွင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့ကို အာဏာပိုင်များက တင်းကျပ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်များက ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများကို ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ပြုလုပ်ထားသဖြင့် နယ်မြေနှင့် ဒေသတွင်း ဆန်ဝယ်ယူရရှိ မှုအခြေအနေမှာလည်း ဆက်လက်စိန်ခေါ်မှုတခုဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ဆန်ရရှိဝေငှရေး အစီအစဉ်လမ်းကြောင်းများအနေဖြင့် ယခုလကုန်အထိ ရပ်တန့်သွားဖွယ်မရှိပေ။
Posted by Andaman Hero at 11:29 PM0comments
ဆွန်ချိုင်းကို ၀န်ကြီးချုပ်သစ်အဖြစ် ပီပီပီပါတီက လျာထား၊ ဆန္ဒပြ ပီအေဒီအဖွဲ့က လက်မခံဟု ပြော
Bangkok Post/The Nations ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈။ ။
ပြည်သူ့စွမ်းအားပါတီ (ပီပီပီ) က ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်၏ ယောက်ဖဖြစ်သူ မစ္စတာဆွန် ချိုင်း ဝေါင်ဆ၀တ်အား ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသစ်အဖြစ် ရွေးချယ်ရန် ယနေ့အတည်ပြုလိုက်သည်။
မစ္စတာဆွန်ချိုင်းကလည်း ၎င်းအနေဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူ၍ နိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေ သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ဟု ပါတီဗဟိုခေါင်းဆောင်များကို ပြော ကြောင်း ပီပီပီပြောခွင့်ရသူ ကူဒက် ဆိုင်ကရာဂျန်က ပြောသည်။
သို့သော် ပီပီပီ အတွင်းမှ နေ၀င်း၏ သူငယ်ချင်းများဟု ခေါ်ကြသည့် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် အမတ်ဖြစ်သူ ဆွန်ဆက်ထောင်စရီကမူ မစ္စတာဆွန်ချိုင်းတဦးတည်းသာ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် သင့်တော်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ဆွေးနွေးငြင်းခုံခွင့်မရသည့် အခြားဗဟို ခေါင်းဆောင်များလည်း ပါတီအတွင်း ရှိနေသောကြောင့် မစ္စတာဆွန်ချိုင်းအနေဖြင့် ပါတီဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်မခံသင့်ကြောင်း ပြောသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့သဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဆိုင်ရာတရားရုံး၏ အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသော မစ္စတာစမတ်နေရာကို အစားထိုးရန် လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပါလီမန်ခေါ်ယူကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ အိမ်စောင့်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာဆွန်ချိုင်းသည် မစ္စတာတပ်ဆင်နှင့် ပို၍နီးစပ်သော ကြောင့် ၎င်းအား ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း အစိုးရကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေသည့် ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ပီအေဒီ) ကပြောသည်။ ဆွန်ချိုင်းသည် တပ်ဆင်၏ ယောက်ဖဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများက လက်ခံသည့် အမျိုးသား အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေးဆိုသည့် စဉ်းစားချက်ကိုလည်း ပယ်ချလိုက်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးအတွင်း၌ ဆက်လက်စခန်းချ ဆန္ဒပြသွားမည်ဟု ပြောသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်သည် အစိုးရကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေမှုနှင့် အစိုးရအား ထောက်ခံဆန္ဒပြနေမှုများအပေါ် မည်သို့မျှ သက်ရောက်မှုရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း ဒီမိုကရက်ပါတီ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ချွန်လိပိုင်က ပြောသည်။
အစိုးရက အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခဲ့စဉ်ကလည်း အရေးပေါ်အခြေအနေအမိန့်ကို ပံ့ပိုး မည့် ဥပဒေစည်းမျဉ်းများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ကြေညာလိုက်သဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံရေး မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်ကိုသာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များက သိရှိသွားခြင်းသာ အဖတ်တင်စေခဲ့ကြောင်း မစ္စတာချွန်လိပိုင်က ဆက်ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ယုံကြည်မှု ပြည်လည်တည်ဆောက် ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ပြန်လည်ရရှိစေရေး ကြိုးပမ်းပေးရန် ၎င်းကတောင်းဆိုလိုက် သည်။
Posted by Andaman Hero at 11:21 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:18 PM0comments
(နိုင်ငံရေးလောကမှ အနားယူပြီဆိုသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင်နှင့် ခေတ်ပြိုင်သတင်းထောက် မင်းနိုင်သူ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပြည့်အစုံ)
Posted by Andaman Hero at 11:13 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 11:04 PM0comments
တတိယနိုင်ငံကိုအခြေချဖို့ထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေကလည်း၊သူတို့သား၊သမီးတွေရဲ့အနာ ဂါတ်၊ပညာရေးတွေကိုအကြောင်းပြသလို၊သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း၊့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ကို တရားဝင်ပြန်လာပြီး၊နိုင်ငံရေးလုပ်နိုင်အောင်၊တတိယနိုင်ငံတွေကအထောက်အထားတခုခုရဖို့ စတဲ့၊အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့သွားကြတယ်လေ။
မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်တဲ့သူကော၊တတိယနိုင်ငံကိုသွားတဲ့သူတွေမှာပါ၊သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူရှိကြတာပဲနော်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀လောက်ကနေအခုအချိန်အထိတတိယနိုင်ငံကိုသွား တဲ့သူတွေတတပ်တအားနဲ့ပြန်လာလုပ်ကြတာတွေကောတွေ့ရပြီလား။
အဲဒါမျိုးဆိုရင်၊နည်းနည်းတော့၊ခက်မယ်လေ။လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တွေ၊နအဖနဲ့အပစ်အ ခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်တုံးက၊ပူးပြီးလုပ်သွားမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးစုတွေအားလုံးအရေးကို တောင်ဆိုပေးမယ်လို့ပြောသွားကြတာပဲ။တကယ်တန်းကျတော့၊အဲဒီအဖွဲ့တွေအားလုံး ဟာ၊နအဖရဲ့အမျိုးသားညီလာခံအတွက်အသုံးခံလိုက်ရတယ်။ညီလာခံမှာတခြားလူမျိုးစု တွေအကျိုးအတွက်ပြောဖို့နေနေသာ၊သူတို့လူမျိုးစုတွေအတွက်တောင်၊ပါးစပ်ဟခွင့်မရခဲ့ တာ၊အားလုံးအသိပါပဲလေ။
နောက်ဆုံးမှာတော့၊မဆလကိုပြောင်းလဲအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အပြင်၊သူတို့တွေကိုမဆလအ ကျိုးအတွက်၊မူဝါဒရေးဆွဲပေးရာမှာကော၊တပါတီစနစ်ဥပဒေပြုရာမှာပါတတပ်တအားနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့၊မဆလထဲအရည်ပျော်ဝင်သွားပြီးတော့၊မဆလရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုခူးစားသွား ကြဘူးတာကိုလည်းမေ့လို့တော့၊မရဘူးပေါ့နော်။
ကိုယ့်လူသူ့ဖက်ပါသွားရင်တော့၊ကိုယ်ပဲပိုအထိနာတယ်။ဒါဟာလည်းလူမျိုးစုလက်နက် ကိုင်တွေနအဖနဲ့အပစ်အခတ်ရပ်ပြီး၊ပူးပေါင်းသွားတဲ့အချိန်ကနေအခုအချိန်အထိဘယ် လောက်နာနေကြသလဲဆိုတာ၊ကာယကံရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအသိဆုံးပါပဲ။
Posted by Andaman Hero at 11:30 AM3comments
By WAI MOE Friday, September 5, 2008
An exiled Burmese dissident who recently traveled back to his troubled homeland said that the purpose of his visit was to gainabetter understanding of the economic and humanitarian challenges facing the country, not to talk politics.
Zaw Oo, head of the Vahu Development Institute, based in Chiang Mai, Thailand, told The Irrawaddy that he madeafour-day trip to Burma in July as an economist interested in the weaknesses exposed by Cyclone Nargis, the biggest natural disaster to strike the country in generations.
Zaw Oo, head of the Vahu Development Institute
The prominent exiled dissident added that he did not discuss politics during his visit. He also confirmed that he was planning to return to Burma again in the near future.
Returning to Burma for the first time in nearly two decades, Zaw Oo said he was saddened by the widespread poverty that he witnessed there.
Asaformer policy advisor to the National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), the government in exile, and director of the Burma Fund, the NCGUB’s think tank, he was once an outspoken opponent of the regime. He was alsoaleader of the All Burma Students’ Democratic Front, an insurgent group formed by Burmese students in 1988.
Some Burmese activists in exile compared Zaw Oo’s trip to one made by Zarni, co-founder of the Free Burma Coalition, in May 2004. Sources close to the Burmese authorities said, however, that the two trips were handled very differently by officials.
During his one-day trip, Zarni met with high-ranking military intelligence officers, including members ofathink tank formed by Brig-Gen Than Tun and Col Hla Min, deputies of the former spy chief Gen Khin Nyunt.
Zaw Oo, by contrast, met mainly with lower ranking figures, including an officer of the Military Security Affairs, which replaced the Military Intelligence Service after the ouster of Gen Khin Nyunt in Oct 2004. Sources also said that Zaw Oo faced some problems applying foravisa.
Zaw Oo denied this, and said that he was well-treated by the authorities when he was in Burma. He said that he met with all of the officials he needed to meet, adding, however, that the meetings were not held formally.
He declined to provide any details about the ranks of the officials he met.
Yin Yin Oo, the sister of Deputy Foreign Minister Kyaw Thu and an official with the Ministry of Foreign Affairs, reportedly playedasignificant role in helping Zaw Oo to getavisa, according to sources in Rangoon.
Zaw Oo said that his trip wasn’t like Zarni’s because he didn’t go to Burma to talk about politics. “I only talked about Nargis and economic issues there,” he said.
He said that the impact of Cyclone Nargis made many government officials realize that there isaneed for change. He added that UN relief experts now have ministerial-level access to the government.
He also said that his trip made him realize that many exiles don’t haveacomplete picture of the situation inside Burma.
Posted by Andaman Hero at 8:51 AM0comments
ကော့သောင်းစက်လှေ မီး လူတဦးသေ၊ ကျပ်သိန်း ၆ ထောင်ကေ...
တောင်ဒဂုံ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း အမှတ် 70 တွင် နေထိုင်...
ရှစ်လေးလုံးနဲ့ စက်တင်ဘာ အာဏာသိမ်း လူသတ်ပွဲ အတွေ့အြ...
မုန်တိုင်းသင့်ကလေးများ ရေသန့်ရရေး စိုးရိမ်ရ၊ WFP က...
ဆွန်ချိုင်းကို ၀န်ကြီးချုပ်သစ်အဖြစ် ပီပီပီပါတီက လျ...
နေရာဟောင်းက ဖယ်ပေးရမည့် နာရေးအသင်း နေရာသစ်တွင် ဆော...
ဦးဝိစာရလမ်းတလျှောက် စနေနေ့ညက စာကြဲ၊ ဘုန်းကြီးကျော...
အမျိုးသားရေး ဦးဝင်းနိုင် နိုင်ငံရေးမှ အနားယူပြီ၊ ...
မညီညွတ်မှုကြောင့် ပေးဆပ်ရသည့် အဖိုးအခများ ဆောင်းပ...
လူဆိုးသူခိုးများကိုသာ ဖမ်းရန်အကြောင်းရှိသည်၊ သတင်း...
Burma's police chief clueless about Suu Kyi hunger...
Breaking News: Daw Aung San Suu Kyi’s resident ass...
Everyone wants to wait. So, what we can do the ne...
NLD statement on DASSK's protest
khitpyaing.org » စစ်အစိုးရ လမ်းပြမြေပုံမှလွ�
FBC denounces to Thai PM's comment on DASSK
Lawyer meets Aung San Suu Kyi, says she's thin but...